10-ka Dhalinyarada Ah Ee Leh Himilooyinka Ugu Badan & Caawinta 2020-21: Saka, Pedri, Reyna...
HomeWararka Ciyaaraha Maanta10-ka dhalinyarada ah ee leh himilooyinka ugu badan & caawinta 2020-21: Saka, Pedri, Reyna…
10-ka dhalinyarada ah ee leh himilooyinka ugu badan & caawinta 2020-21: Saka, Pedri, Reyna…
January 28, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Waxaan warbixintaan kusoo qaadaneynaa 10 ka dhalinyaro ee ugu wanaagsan shanta horyaal ee qaarada yurub goolasha iyo caawinta ay sameeyeen xilli ciyaareedkaan 2020-2021 In kasta oo Arsenal iyo Barcelona laga yaabo inay ku sii nagaadaan xilli ciyaareedyo adag, waxay ugu yaraan leeyihiin qaar ka mid ah dhalinyarada ugu xiisaha badan adduunka.
Koox kasta waxay u baahan tahay khibrad yar qolka labiska laakiin ma jiraan wax la mid ah sida inaad aragto ciyaaryahan dhalinyaro ah oo ku soo dhacaya goobta kooxda koowaad Waxaan eegneynaa 10-ka dhalinyaro ah ee diiwaangaliyay goolasha ugu badan isla markaana caawiya goolal shanta horyaal ee ugu sareysa Yurub xilli ciyaareedkan.
Ka dib markii uu soo jiitay kooxo badan xidigii hore ee Las Palmas, Pedri wuxuu ku biiray Barcelona bilowgii 5 milyan euro waxaana si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah wax soo saarka dhalinyarada ugu fiican kubada cagta Spain 17-jirkan ayaa horey u aasaasay inuu yahay ciyaaryahan muhiim u ah kooxda Ronald Koeman, isagoo diiwaangelinaya labo gool iyo labo caawin oo La Liga ah ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Koeman ayaa yiri bishii November. “Waan ogaa in Barca ay kala soo saxiixatay Las Palmas oo aan arkay cajalad isaga, laakiin uma maleynayo inuu qof walba filanayo sida ugu dhaqsaha badan horumarkiisa tan iyo markii uu ku soo biiray – la ciyaarida iyo tababarida ciyaartoydii ugu fiicneyd Barca oo da’deedu tahay 17 jir, isagoo gaarsiinaya heer sare. heerarka waxqabadka.”
Arday ka qalin jabiyay akadeemiyada Rennes, Truffert ayaa ku riyaaqay ciyaar cajiib ah oo heer sare ah bishii Sebtember 2020, isagoo ka soo kacay kursiga keydka si uu u gaaro gool isla markaana uu ka caawiyo Monaco Daafaca bidix ayaa haatan soo muuqday 14 Ligue 1, isagoo ku daray labo caawin oo dheeri ah magaciisa.
Cayaaryahankii ugu horreeyay ee dhashay 2002 oo ka soo muuqday duullimaadka ugu sareeya ee Jarmalka, Thielmann wuxuu durbaba helaa abaalmarinno ku saabsan bandhigiisa Cologne.
Waxa uu leeyahay labo gool iyo labo caawin 15 kulan oo uu u saftay Bundesliga xilli ciyaareedkan, oo ay ku jirto ku guuleyste waqti-dheeri ah oo uu ka horyimid kooxda heerka labaad ee Schalke.
Ka dib markii uu jabiyay rikoorkii isla markaana uu ku riyaaqay olole horumar leh oo uu la galay Barcelona sanadihii 2019-20, Fati wuxuu bilaabay inuu saameyn weyn ku yeeshay safka barcelona isagoo ujeedkiisu ahaa inuu caddeeyo inuusan hal xilli ciyaareed la yaab lahayn.
18 jirka ayaa dhaliyay afar gool toddobadii kulan ee ugu horeysay ee La Liga ee 2020-21 ka hor inta uusan dhaawac jilibka ah soo gaarin bishii November.
In kasta oo lala xiriiriyay Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona iyo Arsenal, Aouchiche wuxuu si xor ah ugu biiray Saint-Etienne ka dib markii uu ka tagay PSG xagaagii Xiddiga qadka dhexe ayaa aragti fiican ka helay kooxdiisa cusub, isagoo diiwaangelinaya labo gool iyo seddex caawin 12 Ligue 1 uu kusoo bilowday.
Wax soo saar kale oo ka mid ah akadeemiyada PSG, Kalimuendo wuxuu amaah ugu biiray kooxda kale ee Ligue 1 RC Lens isagoo raadinaya kubbadda cagta heerka koowaad Ka dib markii uu noqday Lens-kii ugu horreeyay muddo 70 sano ah oo uu goolal ka dhaliyo seddexdii kulan ee ugu horreysay ee uu bilow u ahaa, waxa uu tan iyo markii uu ku daray gool uu ka dhaliyay Brest iyo caawinaad uu ka sameeyey Lyon.
In kasta oo Lens ay leedahay ikhtiyaar ay ku saxeexdo ciyaaryahanka heshiis joogto ah, PSG waxay u adeegsan kartaa gogol dhaaf si ay uga laabato haddii ay maskaxdooda ka beddelaan muddada amaahda.
Ka dib markii uu ka baxay akadeemiga Barcelona ee Arizona si uu ugu biiro Schalke sanadkii 2019, Hoppe waxaa loo dalacsiiyay kooxdooda koowaad bishii November 2020 Kaliya bilowgiisii seddexaad ee kooxda weeraryahanku wuxuu noqday dareen habeennimo ah isagoo dhaliyay seddexleey goolal ah oo ka dhan ah Hoffenheim si uu u soo afjaro Schalke 30-kii kulan ee aan guuleysan.
Xiddiga reer Mareykan ayaa sidoo kale bartilmaamed ka ahaa kulamadii xigay ee ay la ciyaareen Eintracht Frankfurt iyo Cologne, isagoo dhaliyay goolashiisa ilaa iyo haatan shan gool sideed kulan oo Bundesliga ah.
Tababaraha Schalke Christian Gross – ayaa yidhi. Wuxuu doonayaa inuu sameeyo wax kasta oo ay u baahan tahay si looga baxo xaaladdan Xaqiiqdii waa xirfadle ku dayasho mudan in kasta oo uu wali aad u yar yahay kama xishoodo inuu si aad ah u shaqeeyo Dabcan wali waa nin aad u da ‘yar hadana wali wax badan ayuu baran karaa si uu u noqdo mid heer sare ah, laakiin taas ayaan ka shaqeyneynaa.”
19 jirkan ayaa soo qaaday meeshii uu ka tagay xilli ciyaareedkii hore, isagoo noqday mid ka mid ah magacyadii ugu horreeyay ee kooxda Arsenal ee uu ka hoos ciyaaro Mikel Arteta Saka ayaa leh shan gool iyo labo caawin 18 kulan oo Premier League ah oo uu saftay 2020-21, isagoo garaacay rikoorkiisa lix gool oo toos ah 2019-20.
Arteta ayaa yidhi: Runtii waa nin is-hoosaysiin, runtii ixtiraam leh isla mar ahaantaana leh dabeecaddaas si uu u dalbado kubbadda, si uu u gaaro go’aanno aan caadi ahayn da’diisa,” ayuu yiri Arteta. Waxaan ubaahanahay hogaankaas waana uu ku helayaa taas dabeecaddiisa iyo bandhigiisa.
“Had iyo jeer wuxuu weydiisanayaa inuu tababaro badan sameeyo si uu u horumariyo meelaha uu si ka sii fiican wax uga qaban karo Taasi dhab ahaantii waxay ahayd mid soo saarista waxoogaa ugu dambeeya sanduuqa si loo dhaliyo ama loo caawiyo Wuxuu sameeyaa intaas inbadan.
“Haddii uu awood u leeyahay inuu taas ku sameeyo sirdoonka uu haysto, iyadoo la eegayo heerka shaqada ee uu ku muujiyo garoonka dhexdiisa iyo awooda uu u leeyahay inuu ku fahmo ciyaarta boosas kala duwan, ka dib wuxuu noqdaa ciyaaryahan runtii ka duwan.”
Ka dib markii uu noqday kooxda ugu da’da yar Bayer Leverkusen ee Bundesliga bishii May 2020, Wirtz wuxuu hadda isu taagay inuu noqdo koox heerka koowaad 17-jirkan ayaa ka caawiyay inuu shabaqa soo taabto Kai Havertz, isagoo dhaliyay seddex gool iyo afar caawin 15 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Wiilka xiddigii hore ee Sunderland iyo qadka dhexe ee Manchester City Claudio Reyna, Giovanni wuxuu haatan u ciyaaraa kooxda reer Yurub ee caanka ah ee Borussia Dortmund.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Mareykanka ayaa leh 7 gool oo toos ah oo uu ka dhaliyay Bundesliga xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan seddexleey caawinaad ah kulankii Dortmund ay 4-0 kaga badiyeen Freiburg “Waxaan ugu yeeray riyada Mareykanka ka hor taasina waa run,” ayuu yiri saaxiibkiisa kooxda Dortmund Erling Haaland bishii Juun 2020. Waa 17 jir kaliya waxa uu ku sameynayo garoonka waa wax la yaab leh Mustaqbal weyn ayuu ku leeyahay hortiisa.”
Waxaa ay ahaayeen 10 xidig oo iyagoo da’yar ah soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah.